Al-shabaab oo lix qof ku toogatay Soomaaliya - BBC News Somali
Al-shabaab oo lix qof ku toogatay Soomaaliya
Image caption Al-shabaab ayaa dad badan oo ay ku eedeeyeen jaajuusnimo ku dilay Soomaaliya
Kooxda Al-shabaab ayaa sheegtay in ay toogatay afar qof oo ay ku eedaysay in ay u basaasayeen Maraykanka, Ethiopia iyo dowladda caalamku aqoonsan yahay.
Afarta nin ee ayaa shalay lagu toogtay magaalada Bardhere kadib markii al-shabab ay sheegtay in xaakim iyaga ka tirsan uu ku helay dambi ah in ay taageerayeen CIA-da iyo hay'ado kale oola dagaalamma kooxda.
Dhinaca kale, maanta ayaa laba nin ay Al-shabab ku dishay gobolka Hiiraan, kadib markii eedo kuwaas la mid ah loo soo jeediyay.
Dilkan ayaa ka dhacay barxad ku taala deegaanka buq aqable ee gobolka Hiiraan.
Mid kamida labada nin ee ay toogteen ayay ku eedeeyeen inuu ka tirsanaa ciidamada dawladda halka kan kale ay sheegeen in ay ku heleen danbi ah in uu ciidamo deegaanka uga ururinayay dawladda Soomaaliya.
Galinkii danbe ee shalay ayay sidan oo kale kooxda Al-shabaab waxa ay meel fagaare ah ku toogatay afar nin degmada Baardheere ee gobolka Gedo kuwaas oo ay ku eedeeyeen in ay la shaqaynayeen sirdoonada Maraykanka, kan Ethopia iyo sirdoonka Soomaaliya.
Todobaadkii hore ayaa saraakiil Soomaali ah ay sheegeen in weerarka cirka Maraykanka uu kqaaday lagu dilay sarkaal sare ee dhinaca sirdoonka al-Shabaab, AbdiShakur Tahlil.